Yuu ahaa Nabi Ayuub,waa maxay muhiimaduu maata leeyahay? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda Al-Bayyinah (Surah 98-Caddaynta Cad) waxay sharraxaysaa shuruudaha laga rabo qofka wanaagsan. Waxay leedahay
Suuradda Al-Bayyinah 98: 5
Sidoo kale, Suuradda Al-Casr ’(Surah 103-Maalinta Dhimaysa) waxay sharraxaysaa sifooyinka aan u baahannahay si aan uga fogaano luminta Ilaah hortiisa.
In Dadku khasaaro ku sugunyahay.Marka laga reebo kuwa rumeeyay xaqa ee Camal fiican fala, isuna dardaarma xaqa, isuna dardaarma Samirka.
Suuradda Al-Casr 103: 2-3
Nebi Ayuub wuxuu ahaa ninkaas sida lagu tilmaamay Suuradda Al-Bayyinah iyo Suuradda Al-Casr. Nebi Ayuub aad looma yaqaan. Waxaa lagu sheegay magaciisa Quraanka afar jeer.
An-Nisa 4: 163
Ayuub wuxuu ka muuqdaa liiska nebiyada oo ay ku jiraan Ibraahim, Isa al Masih, Dawud maxaa yeelay wuxuu ku qoray buug Kitaabka Quduuska ah. Buugiisa ayaa qeexaya noloshiisa. Wuxuu noolaa waqtigii u dhexeeyey Nebi Nuux iyo Ibraahim. Kitaabka Quduuska ah wuxuu ku tilmaamayaa sidan:
Ayuub 1: 1-5 Ayuub
wuxuu lahaa dhammaan sifooyinkii wanaagsanaa ee suuradda Al-Bayyinah iyo Surah Al-Casr ay sheegeen in loo baahan yahay. Laakiin markaas Shaydaan wuxuu hor yimid Rabbiga. Buugga Ayuub wuxuu qorey sheekadoodii
alka Cuus la yidhaahdo waxaa joogi jiray nin magiciisa Ayuub la odhan jiray, oo ninkaasuna wuxuu ahaa nin qumman oo toosan, wuxuuna ahaa mid Ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada.
Ayuub 1: 6-12
Haddaba Shaydaan baa sidaas Ayuub u keenay masiibo
9 Markaasaa Shayddaan Rabbiga u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Bal Ayuub ma waxtarla’aan buu Ilaah uga cabsadaa?
Ayuub 1: 13-22
Shaydaan weli wuxuu damcay inuu Ayuub ku kiciyo inuu Rabbiga caayo. Haddaba waxaa jiray imtixaan labaad.
addaba waxaa kaloo jirtay maalin kale oo ay Ilaah wiilashiisu u yimaadeen inay Rabbiga hortiisa isa soo taagaan, oo weliba Shayddaanna wuu soo dhex galay, si uu isna Rabbiga isu soo hor taago.
3 Markaasaa Rabbigu wuxuu Shayddaan ku yidhi, Addoonkayga Ayuub ma ka fikirtay? Maxaa yeelay, isaga oo kale dhulka ma joogo, waayo, isagu waa nin qumman oo toosan, oo ah mid Ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada. Oo weliba isagu daacadnimadiisii wuu sii haystaa, in kastoo aad igu dirtay, si aan isaga sababla’aan ugu halligo.
Ayuub 2: 1-10
Tani waa sababta suuradda Al-Anbya ay u tilmaamayso Ayuub isagoo ooyaya isagoo sujuudsan iyo Suuradda Sad oo sharraxaysa in kan sharka leh (Shaydaan) uu dhibay.
. Ayuub intuu murugsanaa, wuxuu lahaa 3 saaxiib oo soo booqday si ay ugu raaxeeyaan.
Ayuub 2: 11-13
Buugga Ayuub wuxuu qorayaa dooddoodii ku saabsanayd sababta nasiib -darradaas Ayuub ugu dhacday. Wada sheekaysigoodu wuxuu ka kooban yahay cutubyo badan. Marka la soo koobo, saaxiibbadiis waxay Ayuub u sheegaan in masiibadan weyn ay ku dhacdo oo keliya dadka sharka ah, sidaa darteed Ayuub waa inuu si qarsoodi ah u dembaabay. Haddii uu qirto dembiyadan waxaa laga yaabaa in la cafiyo. Laakiin Ayuub had iyo jeer wuxuu ku jawaabaa inuusan eed lahayn xumaantiisa. Ma fahmi karo sababta masiibadu ugu dhacday isaga. Ma raaci karno qayb kasta oo ka mid ah wada sheekaysigooda dhaadheer, laakiin su’aalaha dhexdiisa ayuu Ayuub sheegay waxa uu si hubaal ah u garanayo:
26 Oo markii haraggaygu sidaas u baabba’o dabadeed, Ayaan anigoo aan jiidh lahayn Ilaah arki doonaa,
Ayuub 19: 25-27
In kasta oo uusan fahmin sababta ay masiibadiisu ugu soo dhacday, haddana wuxuu ogaa inuu jiro ‘Bixiye’ dhulka imanaya. Bixiyuhu waa qof bixin kara qaymo ku filan dembiyadiisa. Ayuub wuxuu ugu yeeraa Bixiyaha ‘Bixiyehayga’ si uu u garto in soo furahu u imanayo. Ka dib markii Ayuub ‘haraggiisii ​​baaba’ay’ (wuu dhintay) wuxuu arki lahaa Ilaah oo jidhkiisa ku jira.
Ayuub wuxuu sugayaa Maalinta Qiyaame. Laakiin sarakicidda Ilaah si kalsooni leh ayuu ula kulmi doonaa, maxaa yeelay, kan wax soo furtaa wuu nool yahay, wuuna furtay.
Surah Al-Ma’arij (Surah 70-Jaranjarada) ayaa iyaduna ka hadlaysa furayste Maalinta Qiyaame. Laakiin Suuradda Al-Ma’arij waxay tilmaamaysaa nin nacas ah, oo maalintaas si waali ah u eegaya qof kasta oo wax furaya.
Wayna is arkayaan, dambiiluhuna wuxuu jeclaan inuu iskaga furto Maalintaas Caddibaadeeda Caruurtiisa. Haweenaydiisa, Walaalkiis. iyo qaraabadiisii soo dhawaynayey.iyo waxa Dhulka ku sugan dhammaan markaa uu nabad galo.
Suuradda Al-Macaarij 70: 11-14
Ninka nacasnimada ah ee ku jira suuradda Al-Ma’arij wuxuu u muuqdaa mid aan guulaysan in qof soo furto. Wuxuu raadinayaa samatabbixiye ka soo furan kara ‘Ciqaabta Maalintaas’ – Maalinta Xukunka. Carruurtiisa, xaaskiisa, walaalkiis iyo dhammaan kuwa dhulka jooga ma soo furan karaan. Ma furan karaan isaga maxaa yeelay waxay leeyihiin Ciqaab u gaar ah oo ay bixiyaan.
Ayuub wuxuu ahaa nin qumman, haddana weli wuu ogaa inuu u baahan yahay samatabbixiye maalintaas. Wuxuu kalsooni ku qabay, in kasta oo dhibaatooyinkiisa oo dhan, inuu haystay wax -furahan. Maadaama Tawreedku caddeeyey in dembiga kasta magtiisu tahay dhimasha, furaystaha waa inuu naftiisa ku bixiyaa. Ayuub wuxuu ogaa in furahaagu ‘ugu dambayntii uu dhulka ku istaagi doono’. Kumuu ahaa Ayuub ‘furayste’? Qofka kaliya ee waligiis dhintay, laakiin haddana la sara kiciyey inuu istaagodhulka mar labaad waa ciiseMasiix. Isaga ayaa ah kan kaliya ee laga yaabo inuu la kulmo bixinta Ciqaabta (Geerida) laakiin ‘aakhirka dul istaag dhulka’.
Haddii nin xaq ah oo Ayuub la mid ah uu u baahan yahay naftiisa wax furaha, intee in le’eg ayaan aniga iyo adiga u baahan nahay wax -bixiye si aan u bixinno ciqaabtayada? Haddii nin ka mid ah sifooyinkii wanaagsanaa ee ku taxnaa Al-Bayyinah iyo Al-Casr ’uu u baahday madax furasho ka warran annaga? Yeynaan noqon sida nacasnimada Surah Al-Ma’arij, oo sugta ilaa Maalinta Dambe si waali ah isku dayda inay hesho qof kasta oo ciqaabtiisa fura. Hadda faham sida uu Ciise Masiix kuu soo furan karo, sidii Nebi Ayuub u sii arkay.
Dhamaadka buugga, Ayuub wuxuu la kulmay Rabbiga (halkan) oo nasiibkiisii ​​waa la soo celiyay (halkan).
Tags:Ayuub quraankahazrat shaqoNabi AyuubShaqo iyo rafaad